December | 2015 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Rohingya and Kaman houses were burnt in Kyaukpyu and are now sold to China
December 31, 2015 drkokogyi
Those are Rohingyas and Kaman’s land, burnt and looted by Myanmar Military Government and Rakhine Racist Criminal Governments.
I hope and pray that Rohingyas and Kamans could one day claim back the compensation at ICJ and ICC from them, illegal buyers e.g. China and other countries. IF NLD agree to that in Parliament they should also be held responsible. Continue reading →
U Razak ဦးရာဇတ်
List of 144 Ethnic Minorities of Myanmar ၁၉၇၃ခုနှစ်က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးထံသို့ပေးပို့သော လူမျိုးစာရင်း၌ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၄၄မျိုးရှိသည်
December 30, 2015 December 30, 2015 drkokogyi
Jefrey Tin Ohn
၁၉၇၃ခုနှစ်က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးထံသို့ပေးပို့သော လူမျိုးစာရင်း၌ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၄၄မျိုးရှိသည်
၄/ရခိုင်စစ်တကောင်းလူမျိုး စသည်တို့ပါရှိသည် ထို ၁၄၄ လူမျိုးစာရင်းထဲ၌ တရုတ်စကားပြောသော ကိုးကန်လူမျိုး လုံးဝ လုံဝ မပါချေ
Thank you WP owner, admins and officers. You have empoweredapowerless, voiceless and stageless ordinary person to campaign as an activist for DEMOCRACY, Human Rights and Equal Rights.
December 29, 2015 December 29, 2015 drkokogyi
TQ Ko Kyaw Win for the link
ဝီရသူ အောက်ဆွဲ ပါမောက္ခ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ
December 29, 2015 drkokogyi
လိပ်ကျွန်းအရေး ဆန္ဒပြ ရဟန်းများအနေဖြင့် လိုအပ်ပါက သေနတ်ကိုင်ရဲကြောင်း ဦးပါမောက္ခမိန့်ကြား
လိပ်ကျွန်းအရေး ဆန္ဒပြနေသော မိမိတို့ ဘုန်းကြီးများ အနေဖြင့် လိုအပ်ပါက
သင်္ကန်းချွတ်၍ သေနတ်ကိုင်ရဲကြောင်း အမျိုးသား တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ
ရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်သည့် ဆရာတော် ဦးပါမောက္ခက မိန့်ကြားသည်။
နိုင်ငံရေးသမားတယောက် အနေနဲ့ တခွန်းတပါဒ မှ ဝင်မပြော၊ ဝင်မပါနေနိုင်တာလည်း ထူးတဲ့ ပါရမီပဲ ခေါ်ရလိမ့်မယ်
ဒီလောက် တနိုင်ငံလုံး အုန်းအုန်းကြွက်ကြွက် ဖြစ်နေ၊ ပြောရမယ်ဆို ကမ္ဘာချီသွားတဲ့ ကိစ္စတခု မှာ နိုင်ငံရေးသမားတယောက် အနေနဲ့ တခွန်းတပါဒ မှ ဝင်မပြော၊ ဝင်မပါနေနိုင်တာလည်း ထူးတဲ့ ပါရမီပဲ ခေါ်ရလိမ့်မယ်။
ကျနော် ဖြစ်စေချင်တာ စကားပါးပါးနပ်နပ်ပြောလို့ရတာတွေ အများကြီး။ ဒီကိစ္စကို ပါးပါးကလေး ပြည်သူတွေ နှစ်သက်ကျေနပ်စရာပြောစေ့ချင်တာပါပဲ။
ခုကို အတတ်နိုင်ဆုံး တရားနည်းလမ်းကျဖြစ်စေဖို့ ကြိုးစားပေးမယ်၊ ပြည်သူတွေ ဆန္ဒပြတာတွေ မလုပ်ဘဲ အိမ်မှာပဲနေပေးပါ ဆိုတာမျိုးပြောလိုက်ရင် ပြည်သူ အစစ်နဲ့ တောကြောင် ကွဲသွားပေလိမ့်မယ်။